Waxbarashada Automechanics - GO! DUGSIGA SPECTRUM (BULSHADA TIME / BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
Ilmo waad kaxeyn kartaa baabuurkayga
spectrum School > koorsooyinka our > auto > Farsamoyaqaan auto
ah tababar buuxa ee BSO Automechanics waxaad baraneysaa inaad si madaxbannaan uga shaqeyso gawaarida, gawaarida, baabuurta, iwm. Waa mid tababar aad uwanaagsan oo leh maaddooyin guud oo yar. Waxaad baraneysaa inaad sameyso baaritaanka saxda ah ee cilladaha, dayactirida gawaarida iyo dayactirka sida waafaqsan shuruucda farshaxanka. Tani waxay la socotaa layliyo.
ah 2e degree Automechanics Miyaad baraneysaa in aad isku duubto baaskiil (baaskiil), bedelida bareesooyinka, iwm. Waxaad baran doontaa qalabka korontada ee mootada oo lagu ilaaliyo gaariga. Qaybaha kala duwan ee gaariga ayaa laga wada hadlayaa, waxqabadyadii aad ka bartay waxay ku khuseeyaan mootada, hadda waxay ku khuseeyaan baabuurka. Waxad baraneysaa (de) isku dhafka iyo geeddi-socodka shaqada birta iyo qaybaha jirka: hagaajinta dildilaaca, ka saara burburka, bedelida qaybaha ...
ah 3e degree Automechanics waxaad heleysaa aqoon ballaadhan qaybaha kala duwan iyo hawlgalka baabuurka. Tani waxay ku lug leedahay mihnadaha iyo qalabka korontada. Sidoo kale mashiinnada, qaybta gadaal, shasis, hababka kala duwan ee shidaalka iyo shaqooyinka jirka ayaa ku jira barnaamijka. Waxaad baraneysaa inaad isticmaasho waraaqo xisaabeed oo fudud adoo isticmaalaya kombiyuutarka si loo xisaabiyo qiimaha kharashka iyo kala hadal macmiilka.
Inta lagu jiro shaqadaada waxaad baraneysaa inaad tixgeliso qodobada amniga ee makaanikada baabuurta iyo sharciyada ku saabsan caafimaadka, nadaafadda, deegaanka iyo xajmiga.
Inta lagu jiro Layli waxaad heleysaa fursad balaadhan oo ah waxa aad taqaanid oo aad ku codsan karto ficil ahaan. Waxaad kaloo dhadhan kartaa xaalada dhabta ah ee shaqada garaashka.
Ma jeceshahay furaha baabuurta, mootooyinka iyo baaskiiladaha? Ma jeceshahay gawaarida quruxda badan? Miyaad dooneysaa inaad wax ka barato dhaqanka oo aadan u jilicsanayn shaqada jireed?
Waxaad mar walba ku bilaabi kartaa barnaamijka Automechanics, inkastoo aqoonta aasaasiga ah ee farsamada ay tahay mid la hubo. Waxaan rajeyneynaa inaad si xiiso leh u barato oo aad u hesho daneyn ballaaran oo ku saabsan farsamada iyo baabuurta. Waxaad ka heleysaa maadooyin guud oo kooban, laakiin aadan hoos u dhigin qaybta farsamada ee koorsada. Ka dib oo dhan, gawaarida casriga ah waxaa ka buuxa qalabka farsamada iyo teknoolajiyada cusub.
Kadib shahaadada 3e Farsamoyaqaan auto waad heleysaa shahaadada ee Waxbarashada Sare. Hase yeeshee, waad haysataa ma ahan diblooma waxbarasho sare. Sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa inaad haysato mid 7e sannadka khaaska ah in la raaco. Dugsigeena waxaad ku takhasusi kartaa aagga Daraasada Awooda Awood-koronto. Ka dib markaad hesho Dibloomada waxbarashada dugsiga sare iyo Maareynta Ganacsiga aad tahay mashiin baabuur oo buuxa oo aad shaqo bilaabi karto ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga.
Sannadka 6e ee kooban (36KB, .pdf)